बलिवुडका अहिलेसम्मका धेरै कमाई गर्ने १० फिल्म, कुन कुन छन् ?
२०७८ मङ्सिर १ बुधबार
काठमाडौँ । बलिवुड फिल्ममा कोरोना महामारी पछि खुलेका सिनेमा घरमा सुर्यबंशीको राम्रो परफरमेन्सबात बलिवुड निकै उत्साहित बनेको छ । सुर्यबंशीको सफलतापछि लामो समय देखि रोकिएर रहेका एकपछि अर्को फिल्मको रिलिज मिति घोषणा भैरहेका छन् ।
अक्षयकुमार अभिनित सुर्यबंशी उनको नाममा सफल फिल्मको शृंखलामा अर्को फिल्म जोड्न सफल भएको छ । तर बलिवुडमा अहिलेसम्म अक्षयकुमारका फिल्म धेरै कमाई गर्ने फिल्मको सूचीमा उत्कृष्ट १० भित्र भने पर्न सकेका छैनन् ।
पछिल्ला बर्षहरुमा अक्षयकुमारलाई बक्स अफिसका सबैभन्दा भरोसा गर्न लायक अभिनेता मानिएको छ । यसकै कारण उनका हरेक बर्ष कम्तिमा चार फिल्म रिलिज भैरहेका छन् ।
अहिलेसम्म धेरै कमाई गर्ने १० फिल्ममा सलमान खान र आमिर खानका ३-३ फिल्म रहेका छन् भने प्रभास, ऋतिक रोशन, रणबिर कपूर र रणबीर सिंहका एक एक फिल्म रहेका छन् ।
यस सूचीमा दशौ स्थानमा २०१३ मा रिलिज भएको आमिर खान, अभिषेक बच्चन र उदय चोपडा स्टारर फिल्म धूम-३ रहेको छ । धूम-३ ले रिलिजको तीन दिनमै सय करोड कमाई गरेको थियो भने कुल कमाई २८४.२७ करोड गरेको थियो ।
यस सूचीको नवौं स्थानमा सलमान खानको २०१६ मा रिलिज भएको फिल्म सुल्तान रहेको छ । सुल्तानले रिलिजको तीन दिनमा सय करोड कमाई गरेको थियो भने कुल कमाई ३००.४५ करोड गरेको थियो ।
यस सूचीमा आठौ स्थानमा रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोणको २०१८ मा रिलिज भएको फिल्म पद्मावत रहेको छ । पहिलो सातामा १६६.५० करोड कमाएको पद्मावतले कुल कमाई ३०२.१५ करोड गरेको थियो ।
त्यस्तै यस सूचीको सातौ स्थानमा ऋतिक रोशन र टाइगर सराफ अभिनित २०१९ मा रिलिज भएको फिल्म वार रहेको छ । पहिलो साता २३८.३५ करोड कमाई गरेको वारले कुल कमाई ३१७.९१ करोड गरेको थियो ।
त्यसैगरी यस सूचीको छैटौ स्थानमा सलमान खानको २०१५ मा रिलिज भएको फिल्म बजरंगी भाइजान रहेको छ । पहिलो सातामा १८४.६२ करोड कमाई गरेको बजरंगी भाइजानले कुल कमाई ३२०.३४ करोड गरेको थियो ।
त्यस्तै यस सूचीमा पाँचौ स्थानमा सलमान खानकै २०१७ मा रिलिज भएको अर्को फिल्म टाइगर जिन्दा है रहेको छ । यस फिल्मले पनि रिलिजको तेस्रो दिनमै सय करोड कमाई गरेको थियो भने कुल कमाई ३३९.१६ करोड गरेको थियो ।
यस सूचीको चौथो स्थानमा आमिर खानको २०१४ मा रिलिज भएको फिल्म पिके रहेको छ । रिलिजको चार दिनमा सय करोड कमाई गरेको यस फिल्मको कुल कमाई ३४०.०८ करोड रहेको छ ।
त्यस्तै यस सूचीमा तेस्रो स्थानमा रणविर कपूर अभिनित २०१८ मा रिलिज भएको फिल्म सन्जू रहेको छ । पहिलो साता२०२.५१ करोड कमाई गरेको सन्जूले कुल कमाई ३४२.५३ करोड गरेको थियो ।
यस सूचीमा दोस्रो स्थानमा आमिर खान अभिनित २०१६ मा रिलिज भएको फिल्म दंगल रहेको छ । पहिलो साता १९७.५४ करोड कमाई गरेको दंगलले कुल कमाई ३८४.३८ करोड गरेको थियो ।
त्यस्तै बलिवुडमा अहिलेसम्म धेरै कमाई गरेको फिल्म बाहुबली-२ हो । २०१७ मा रिलिज भएको यस फिल्मले पहिलो सातामा २४७ करोड कमाई गरेको थियो भने कुल कमाई ५१०.९९ करोड रहेको थियो ।
ओटीटीमा नआउने भयो प्रभासको राधे श्याम
काठमाडौं । साउथ सुपरस्टार प्रभास र पूजा हेगडेको फिल्म ‘राधे श्याम’ प्रति दर्शकको चासो बढ्दो छ । केही दिनअघि निर्माताहरु फिल्म ओटीटी प्लेटफर्मममा पनि रिलिज गर्ने तयारी गरिरहेको खबर बाहिर
काठमाडौँ । बलिवुड गायिका लता मंगेशकर अहिले पनि मुम्बईको ब्रीच क्यान्डी अस्पतालको आईसीयूमा उपचाररत रहेकी छन् । लता मंगेशकरको आधिकारिक ट्विटर एकाउन्टबाट उनको स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी दिइएको छ । लता मंगेशकरको
फिल्म बिस्टमा थलापति विजयको पारिश्रमिक सय करोड !
काठमाडौं । दक्षिण भारतीय सुपरस्टार थलापति विजयले आफ्नो पछिल्लो फिल्म ‘मास्टर’बाट दर्शकमाझ एउटा भिन्न पहिचान बनाएका छन् । कोभिडको पहिलो लहरपछि सन् २०२१ मा रिलिज यो फिल्मले बक्स अफिसमा उत्कृष्ट
भारतीय सेलिब्रिटीका दुख- सन्तानलाई मिडियाबाट जोगाउनै गाह्रो !
काठमाडौं । अनुष्का शर्मा र विराट कोहलीकी छोरी वामिकाको फोटो हालै मात्र सोसल मिडियामा भाइरल भयो । अनुष्का आफ्नी छोरीलाई लिएर दक्षिण अफ्रिका र भारतका विभिन्न स्थानमा पति विराटको खेल